Dzimwe nomwe dzimwe nzvimbo dzetsika dzakawedzerwa kuUNESCO's World Heritage List
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Azerbaijan Breaking Nhau » Dzimwe nomwe dzimwe nzvimbo dzetsika dzakawedzerwa kuUNESCO's World Heritage List
Azerbaijan Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Panguva yemusangano wayo muBaku neMugovera, World Heritage Committee yakanyora nzvimbo nomwe dzetsika pa UNESCO's World Heritage Rondedzero. Saiti dzakawedzerwa masikati ano dziri muCanada, Czechia, Germany, Republic of Korea, Myanmar nePoland. Zvinyorwa zvichaenderera mberi mangwana, 7 Chikunguru.
Nzvimbo nyowani, nekuraira kwekunyora:
ChiBagan (Myanmar) - Kunyepa pakakombama keRwizi rweAyeyarwady mukatikati mebani reMyanmar, Bagan inzvimbo inoera, iine hunyanzvi hwakasiyana hwehunyanzvi hweBuddhist nemapurani. Zvikamu zvisere zvesaiti izvi zvinosanganisira tembere dzakawanda, hupfu, dzimba dzemamongi uye nzvimbo dzekufambira, pamwe nematongo ekuchera matongo, mafrescoes uye zvivezwa. Iyo chivakwa chine humbowo hunoshamisa kune iyo yepamusoro peBagan budiriro (11th-13th mazana emakore CE), apo saiti yacho yaive guta guru rehumambo hwenharaunda. Iyi ensemble yemapurani akakurisa inoratidza kusimba kwekuzvipira kwechitendero cheumambo hwekutanga hweBuddhist.
Seowon, Korean Neo-Confucian Dzidzo (Republic of Korea) - Ino saiti, iri pakati nepakati kumaodzanyemba kweRepublic of Korea, ine mapfumbamwe seowon, inomiririra rudzi rweNeo-Confucian academy yedzinza raJoseon (15th-19thmazana emakore CE). Kudzidza, kunamatwa kwevadzidzi pamwe nekudyidzana nezvakatipoteredza aive mabasa akakosha eiyo seon, yakaratidzwa mukugadzirwa kwavo. Yakavakirwa padyo nemakomo uye masosi emvura, vakafarira kukoshesa kwechisikirwo nekurimwa kwepfungwa nemuviri. Izvo zvivakwa-zvemavara-zvivakwa zvakagadzirirwa kufambisa kubatana kune iyo nzvimbo. Iyo seon inoratidza chiitiko chenhoroondo umo Neo-Confucianism kubva kuChina yakashandurwa kuita mamiriro eKorea.
Kunyora-padombo / Isínai'pi (Canada) - Ino saiti iri pamucheto wekuchamhembe kwenzvimbo dzakaomesesa Plains dzeNorth America, pamuganhu pakati peCanada neUnited States of America. Iyo Milk River Valley inotonga pamusoro peiyo nzvimbo yemagariro, iyo inoratidzirwa nehukuru hwembiru kana hoodoos - mbiru dzedombo dzakavezwa nekukurwa kwevhu kuita zvimiro zvinoyevedza. Vanhu veBlackfoot (Siksikáíítsitapi) vanhu vakasiya zvinyorwa nekupenda pamadziro ejecha eMilk River Valley, zvichipa humbowo kumashoko kubva kuZvitsvene. Iyo yekuchera matongo inoramba iri kubva muna 1800 BCE kusvika pakutanga kwenguva yepashure-yekubata. Iyi nharaunda inoonekwa seinoyera kuvanhu vemaBlackfoot, uye tsika yavo-yemazana emakore inoenderera kuburikidza nemhemberero uye mukutsungirira kuremekedza nzvimbo.
Erzgebirge / Krušnohoří Mining Dunhu (Czechia / Germany) - Erzgebirge / Krušnohoří (Ore Mountains) anotenderera dunhu kumaodzanyemba-kumabvazuva kweGerman (Saxony) uye kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweCzechia, iyo ine hupfumi hwesimbi dzinoverengeka dzakashandiswa kuburikidza nekuchera kubva kuMiddle Ages zvichienda mberi. Iyo nharaunda yakave yakakosha sosi yesirivha ore muEurope kubva muna 1460 kusvika 1560 uye ndiyo yakakonzera hunyanzvi hwetekinoroji. Tin yaive nhoroondo simbi yechipiri kubviswa nekugadziriswa panzvimbo iyi. Pakupera kwe19th zana ramakore, iyo nharaunda yakave muhombe wepasi rose weuranium. Iyo tsika tsika yemakomo eOre akave akaumbwa zvakadzama nemakore mazana masere emigodhi ingangoenderera ichienderera, kubva kune gumi nemavirith kune 20th zana, pamwe nekuchera, kupayona masisitimu ekutarisira mvura, hunyanzvi hwekugadzirisa zvicherwa uye nzvimbo dzekunyungudutsa, nemaguta emigodhi
Nzvimbo yekutakura nekudzidziswa kweMabhiza Ekutakura Mabhiza eKladruby nad Labem (Czechia) - Iri munzvimbo yeStřední Polabí mubani reElbe, saiti iyi ine ivhu rakapetana, rine jecha uye rinosanganisira minda, mafuro akakomberedzwa, nzvimbo ine masango nezvivakwa, zvese zvakagadzirwa nechinangwa chikuru chekuberekesa nekudzidzisa kladruber mabhiza, rudzi rwebhiza rinoshandiswa mumitambo nedare ramambo reHabsburg. Imperial stud purazi yakavambwa muna 1579 uye yakatsaurirwa kune iri basa kubva ipapo. Iyo ndeimwe yemasangano anotungamira ekuberekesa mabhiza muEurope, akavandudzwa panguva iyo mabhiza aiita basa rakakosha mukutakura, zvekurima, rutsigiro rwemauto uye vamiriri vehumambo
Mvura Management Sisitimu yeAugsburg (Germany) - Iyo manejimendi manejimendi system yeguta reAugsburg yakashanduka muzvikamu zvinoteedzana kubva ku14th zana remakore kusvika nhasi. Inosanganisira network yemigero, shongwe dzemvura dzakatangira pa15th kuna 17th mazana emakore, ayo aigara kupomba michina, mvura-yakatonhorera mabheki matemba, iyo sisitimu yakakurisa matsime uye magetsi emagetsi emagetsi, ayo ari kuenderera mberi nekupa simba rakasimba nhasi. Izvo zvigadzirwa zvehunyanzvi zvinogadzirwa neaya manejimendi manejimendi system zvakabatsira kumisikidza Augsburg sepiyona mu hydraulic engineering.
Krzemionki Prehistoric Yakavezwa Flint Mining Dunhu - (Porendi) - Iri munzvimbo yemakomo ye Świętokrzyskie, Krzemionki inzvimbo ine ina yemigodhi nzvimbo, kubva kuNeolithic kuenda kuBronze Age (munenge muna 3900 kusvika 1600 BCE), yakatsaurirwa kuburitsa nekugadzirisa matombo edombo, ayo ainyanyo shandiswa nedemo. -kugadzira. Iine zvivakwa zvayo zvepasi pevhu, matombo emisangano yedombo uye mamwe ma4,000 shafts nemakomba, saiti iyi inoratidzira imwe yeakajeka epamberi pevhu epasi peganda dhizaini nekugadzirisa masisitimu anozivikanwa kusvika nhasi. Iyo saiti inopa ruzivo nezve hupenyu uye basa munzvimbo dzekare uye inopupurira kutsakatika kwetsika tsika. Icho humbowo hwakasarudzika hwekukosha kwenguva yepamberi uye yemigodhi yedombo rezvigadzirwa munhoroondo yevanhu.
The 43rd chikamu yeWorld Heritage Committee inoenderera kusvika 10 Chikunguru. Dzimwe nhau paUNESCO